General Knowledge Archives |
အရမ်းကိုချမ်းသာတဲ့ ကုန်သည်ကြီးတစ်ဦးဆီမှာ ဇနီးလေးယောက်ရှိပါတယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက စတုထ္ထမြောက် ဇနီးကိုအချစ်ဆုံးပဲ ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ဝတ်ရုံကို ဆင်မြန်းစေပြီး သိမ်မွေ့နူးညံ့စွာ ပဲဆက်ဆံ တယ် ။ ကုန်သည်ကြီးက ဒီ ၄ ယောက်မြောက်ဇနီးကို အရမ်းဂရုစိုက်ပြီး ဘာမှတော့မပေးဘူး ဒါပေမယ့်ပေး …
၁၉၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ စက်တင်ဘာလ ၆ ရက်နေ့မှာ Thomas Lynn Bradford ဆိုတဲ့ လူသိများတဲ့ ပါမောက္ခတစ်ဦးဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံ Michigan ပြည်နယ်က Detroit မြို့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ …
၁။ ဆွီဒင် ( ၈၅ % ) ဘာသာမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲသောနိုင်ငံများကို ကူညီလျှုဒါန်းရာတွင် ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် အများဆုံးဖြစ်သောနိုင်ငံ၊ IT နည်းပညာ ထိပ်တန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သည်။ . ၂။ ဒိန်းမတ် ( ၈၀ % …
ကုလသမဂ္ဂ သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာများ
ဦးသန့်သည် ၁၉၅၇ ခုနစ်မှ ၁၉၇၁ ခုနစ် အထိ ကုလသမဂ္ဂတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး အဖြစ် ၁၉၅၇ ခုနစ်မှ ၁၉၆၁ ခုနစ်ထိ၊ ထို့နောက်တွင် အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အဖြစ် ၁၉၆၁ …
August 6, 2021 August 6, 2021 - by admin
တောင်အမေရိကတိုက်မှာ ဒုတိယအသေးဆုံးနိုင်ငံလေးဖြစ်ပေမယ့် အဖွံ့ဖြိုးဆုံး တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဖြစ် ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ ဥရုဂွေးနိုင်ငံရဲ့ 2015 ကမှအနားယူသွားတဲ့ သမ္မတကတော့ အသက် ရရ နှစ်အရွယ် Jose Alberto Mujica Cardano ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကမ္ဘာ့အရက်ရောဆုံးနဲ့ အဆင်းရဲဆုံးသမ္မတအဖြစ် …
တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည် …… အမှောင်တကာ့ ” အမှောင်ဆိုတာ”
*တစ်ခါတုန်းက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးသည်သူ့မှာရှိသော ပညာရှိများကို အဖြေတစ်ခု ရှာခိုင်းလေသည်!! ဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင် မသိသေးသောကြောင့် ပညာရှိများကိုမေးခြင်းဖြစ်သည်!!တစ်ကယ်လို့ သူစိတ်တိုင်းကျတဲ့ အဖြေမရရင်အားလုံးကို ပြည်နှင်ဒဏ်ပေးမည်ဆိုသော အမိန့်တော်ပါ မိန့်လိုက်သေသည်!! *ဘုရင်းကြီး မေးသောမေးခွန်းမှာ @အမှောင်တကာ့အမှောင်တွင် ဘယ်အမှောင်သည် အမှောင်ဆုံးနည်းဟု@ေ မးသောမေးခွန်းဖြစ်သည်!!တစ်ယောက်ယောက်က ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင် …
August 5, 2021 August 6, 2021 - by admin
သီ ပေါ မင်း သည် စုဖုရားလတ် တစ် လင်တစ် မ ယား စနစ်၏ ပြင်း ထန် သော အပြစ်ပေးမှု များ အား သိ ရှိ ပါ သော် …
© 2018-2021 celenewsasia.com. All rights reserved